Mashruuc dhallinyarada shaqo lagu geynayo EU - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mashruuc dhallinyarada shaqo lagu geynayo EU
La daabacay tisdag 18 juni 2013 kl 15.33
Mashruuca shaqo-geynta dhallinyarada
Waxaa loo sahlayaa in dhallinyaro badan oo reer Iswedhen ah in ay shaqo ka helaan waddamo kale oo kamid ah EU. Mashruucan oo loo baxiyey "Ditt första Eures-jobb" ayaa waxaa maagelinaya kommishinka Yurub. Gisela Sarri oo ah isku duwaha mashruucaan ayaa sheegtey in hadafka laga leeyahay uu yahay in la kordhiyo dhaqaaqa muruqa shaqada guud ahaan EU, balse ay la socon doonto sharuudo.
- Haa, sharuuda waa da'da iyo in ruuxa ahaado muwaadin heysta dhalashada EU uuna deganyahay waddan EU ah, shaqada uu ka raadsanayo dal kale oo EU ah oo aan aheyn dalkiisa. Ujeedka arintaan laga leeyaheyna waxa weeye in la kordhiyo isku socodka guud ahaan cariga EU. Ayey tiri.
Iswedhen ayaa kommishinka EU kaga dalbatey dhaqaale lagu maagelnayo 300 oo dhallinyaro ah. Mashruucaan ayaa guud ahaan EU la doonayaa shaqo lagu siiyo 5000 oo dhallinyaro ah.
Shaqo raadiyaasha ay da'dooda u dhaxeyso 18 illa 30 sanno ayaa lagu caawinayaa mashruucaan shaqo raadintyooda iyo tikidka ay ku tagaan marka wareysiga shaqo lala yeelanayo. Waxaa sidoo kale la suurtogelinayaa in dhalliyaradan helaan gunooyin go'an oo dhaqaale taas oo ah wax cusub gabi ahaanteed, ayey Gisela Sarri.
- Ha, waxaa loo gudayaa qarashka ay ku aadeen wareysiga shaqada, sidoo kale waxaa la siin doonaa qarash hadii qofka shaqada helo si uu nolashii cusub ugu suurtogasho in uu ka bilowdo danka cusub. Qarashkaas oo ku saleysnaan doona waddanka ruuxa shaqada ka helay, waana qarash har mar qofka lawado siinayo, ayey tiri.
Shirkadda ay ka howlgalaan dad ka badan 250 ruux ee shaqaaleysiisa dhallinyaradaan ayaa sidoo kale mashruucaan laga siinayaa taageero dhaqaale. Hadaba si looga hortago in si xun looga faa'ideysto taageeradaan ayaa waxaa laga doonayaa qofka dhallinyarta ah in uu la yimaado warqad uu saxiixey shaqo bixiya oo ah in la shaqaaleeyey.
Maanta waxaa jiro 60 ruux oo ka howlgala laanta shaqada arbetsförmedlingen kuwaas oo ku howl-gala mashruucaan Eures oo ayna tahay in ay gacan siiyaan dhallinyarada dooneysa in ay shaqo ka raadsadaan waddan kale oo EU ah.